ओलीले एमालेवाट लखेटे, अब म कहाँ जाउँ ? : योगेश भट्टराई – hamrosandesh.com
ओलीले एमालेवाट लखेटे, अब म कहाँ जाउँ ? : योगेश भट्टराई
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले माधव नेपालले पनि दश बुँदे सहमतिमा समर्थन जनाएको स्पष्ट पारेका छन् । कार्यदलले दश बुँदे सहमति गरेलगत्तै माधव नेपालकहाँ सहमति पत्र बोकेर घनश्याम भुषाल पनि नेपालको निवासमा पुगेको उनको भनाई छ । उनले आफूहरु त सुरुदेखि नै एकताको पक्षमा रहेको स्मरण गराए ।
नेता भट्टराईले आफूहरुलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेवाट लखेटेको बताएका छन्। उनले एमालेका नेताहरुले पनि आफूलाई लखेटेको बताएका छन्।